Progressive Voice Myanmar » U.S. Embassy Statement on Freedom of Speech
April 23rd, 2019 • Author: U.S. Embassy in Burma • 1 minute read
The Supreme Court’s ruling in Wa Lone and Kyaw Soe Oo’s case is deeply disappointing. These convictions, like the recent detention of filmmaker Min Htin Ko Ko Gyi and of the Peacock Generation Thangyat troupe, and the recent charges brought against editor U Ye Ni and other journalists, point to an increasing intolerance for free speech in Myanmar. Journalism, satire, peaceful protest, and other forms of legitimate expression should not be crimes inademocratic society.
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့၏အမှုအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ များစွာစိတ်ပျက်မိပါသည်။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးနှင့် ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်သံချပ်အဖွဲ့ဝင်များအား မကြာသေးမီက ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် အယ်ဒီတာဦးရဲနည်နှင့် အခြားသောသတင်းထောက်များကို မကြာသေးမီက တရားစွဲဆိုခြင်းများကဲ့သို့သော ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အတွက် သည်းခံမှုမရှိခြင်းပိုမိုတိုးလာနေကြောင်း ထောက်ပြနေပါသည်။ သတင်းစာ၊ သရော်စာ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုနှင့် အခြားသောတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများသည် ဒီမိုကရက်တစ် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အတွင်း ပြစ်မှုများ မဖြစ်သင့်ပေ။